Linux yatodarika vanoshandisa mamirioni makumi matanhatu neshanu | Linux Vakapindwa muropa
Linux yatodarika vanoshandisa mamirioni makumi masere neshanu
Zvinoita sekudaro Linux inongoiswa nevatatu vatatu kana mageek, kureva kuti, vashoma. Asi zvinozoitika kuti idiki kwazvo, uye ndinosimbisa kuti yakakura sei, sezvo iri kushandiswa nevashandisi vakawanda kupfuura zvinoita sezvinoonekwa mune zvimwe zvidzidzo zvinoverengeka zvichibva pamubvunzo weanoshanda masisitimu kune mamwe mapeji ewebhu mune dzimwe nzvimbo dzenzvimbo uye kuti hadzimiriri iyo yakazara zvazvino mufananidzo.
Semuenzaniso, kana ukadaro ongororo iyoyo MuUnited States, uko Windows inokunda uye kune yakakura kwazvo inotevera yeApple, sarudzo dzinenge dzisingafadze Linux. Kune rimwe divi, ongororo imwecheteyo inoitwa kuChina, imwe yenyika dzine vanhu vazhinji uye uko Linux iriko mumazhinji emakomputa, mhedzisiro yacho yaizosiyana uye inofadza chikuva chepenguin. Kune rimwe divi, kana mune imwe kesi kana mune imwe isu tiri kukanda chaiyo data.
Zvatinotofanira kujekesa nezvazvo ndezvokuti mumaseva eLinux anotsvaira, uye mumakomputa makuru anenge makumi mapfumbamwe nemasere muzana, munharembozha tisingatauri izvozvo Android ndiye mutungamiri (kwete chete mumafoni efoni, asi ndiyo inonyanya kushandiswa OS munyika) uye yakavakirwa paLinux, iyo IoT, nezvimwe, uye isu tinongofanirwa kutarisa desktop desktop. Zvinopokana kuti Linux yakagadzirirwa iyo desktop desktop uye ndiyo yega chikamu icho painomira, kutsvaira iyo yasara iyo yaisina kugadzirirwa. Izvi zvinopa zano rekushomeka uye kushanduka kuchinjika kune zvese ...
Zvakanaka, vakomana vanobva kuSUSE vaita chidzidzo chitsva muna2016 uye vaburitsa data rinonakidza, nekuti ivo vanovimbisa kuti vatove 86 mamirioni vashandisi pane desktop. Kubva 1991 apo wega mushandisi aive Linus Torvalds kusvika 2016, ndiko kuti, mumakore makumi maviri nemashanu yakawedzera kudarika iyo 25M iyo SUSE inotaura nezvayo, yakakosha feat tichifunga kudzama kweWindows neMac mune ino chikamu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux yatodarika vanoshandisa mamirioni makumi masere neshanu